Nchekwa igwe ojii na akụkọ ụjọ ndị ọzọ | Site na Linux
Nchekwa igwe ojii na akụkọ ụjọ ndị ọzọ
Ọnwa ole na ole gara aga, gafere bipụtara ederede echiche banyere uru, na ọkachasị nchekwa igwe ojii. Emechara m gosipụta echiche ya na-enweghị nnukwu ihe mgbu.
Tinyere ihe ndị ọzọ, elav kwuru ihe ga - eme data m ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ funahụrụ na mberede n'otu ụzọ ahụ dị ka Megaupload?
Ọfọn, ọ dị mfe, ị na-atụfu data gị na ihe ọ bụla ọzọ ị debere na ya ma yikarịrị na-enweghị ohere ọ bụla nke iweghachite ya.
N'iburu nke a, echere m na ọ bụrụhaala na echeghị m ọrụ ndị ejiri maka ebumnuche ndị NSA ahụghị nke ọma dịka ọ dị na Megaupload na nso nso a hotfileMy faịlụ e chebere si clutches nke chakoo na Obama, ma dị ka m dị na ghọtara, m na-ezighị ezi.
Megacloud, ọrụ nchekwa igwe ojii nke nyere 16GB nchekwa igwe ojii na-akwụghị ụgwọ, mechiri sava ya na-enyeghị ụdị ọkwa ma ọ bụ ịdọ aka na ntị ọ bụla, anatabeghị m ozi email, n'oge ọ bụla enwere ọbụlagodi tweet banyere okwu a. O furu efu ịhapụ ihe ọ bụla ma ọ bụghị ụtọ nke enweghị mgbagwoju anya.
Mgbe m na-enyocha obere ihe n'okwu ahụ, achọpụtara m na ọ bụghị naanị ụdị ọrụ a ka ọ ga-apụ na mberede na-enweghị ihe kpatara ihe kpatara nke a.
Nirvanix, ihe ngwọta igwe ojii nke m na-eche maka nchịkọta akụkọ, agụmakwụkwọ na ọrụ egwu nke m na-emekọ ọnụ, mechiri ọnụ ụzọ ya na-enye ndị ahịa ya ọkwa mmechi ahụ, na-enye naanị izu abụọ iji nweta data ha.
Nke a abụghị obere ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enweghị uche, mana ọ rụrụ ọrụ dị ka ikpo okwu maka ọtụtụ mbido na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'etiti dabere na ọtụtụ ọrụ ya na ịnweta ya na-erughị afọ asaa nke ahụmịhe.
Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị otu n'ime akụkọ abụọ a kwụsịrị na nnukwu ọdachi faịlụ, ọ na-ahapụ anyị ndị ọrụ igwe ojii Copy na oke ụjọ nke mberede data anyị echekwara na igwe ojii.
1.1 Ebe etiti
1.2 P2p na njikwa onwe ya
Ọbụna na ọnọdụ dị egwu dị ka nke a, ọ bụghị igwe ojii niile dị na mbara igwe. Enwere ego, nchekwa, na ụzọ nchekwa igwe ojii ọzọ.
Ha na-adabere na ihe nkesa dị n'etiti, nke na-akpaghị aka na-adịghị ike, mana ha nwere aha zuru oke iji tụkwasị data anyị obi na ngwọta ndị a:
Ma eleghị anya, n'ime mmadụ abụọ ikpeazụ gara aga, ị ga-echegbu onwe gị banyere NSA, mana mgbe ị nwere ikike maka faịlụ gị, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị.
P2p na njikwa onwe ya
Agbanyeghị na ndị egwuregwu pere mpe n'ụdị a, ha bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, ebe ọ bụ na ha yiri iyi, a na-arụkọ faịlụ n'etiti kọmputa nkeonwe ma ọ bụ nke ijikwa onwe gị, kama ịgafe sava nke ịnweghị ohere iburu ụzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Nchekwa igwe ojii na akụkọ ụjọ ndị ọzọ
A bụ m nke ụlọ akwụkwọ ochie mgbe a bịara n’ịkwado ma ọ bụ ịchekwa. Enwere m Dropbox n'ihi na smartphone bịara na 50 GB maka afọ 2. Otu na-enwe obi ụtọ ịse foto n'ọhịa na ebe ndị ọzọ, yana maka mma, enwere m ya na ndị ọzọ. Ma data ma dị mkpa, ọ bụghị nzuzu! Maka nke ahụ, enwere m ọtụtụ ohere na draịvụ ike na pendrives, n'oge ọ naghị enye m draịva mpụta, ọ bụ ihe nwere ọtụtụ ụlọ ma ọ bụ obere.
M na-eche otu ihe ahụ ka gị. My data, backups m, ihe a niile ... Anaghị m atụkwasị onye ọ bụla ọzọ obi karịa na m ga-echedo ha, ọbụlagodi na VPS nke m, nke ahụ bụ etu m si eme mkparị 🙂
Lọikwuu. 78 dijo
Ihe kachasị mma bụ ịnweta data gị na ihe nkesa gị, yabụ ị na-ezere iwe na ụlọ ọrụ nwere ike ịgwa gị ihe ị nwere ike ma ọ bụ enweghị ike iji data gị.
Zaghachi na Carpanta
Youkwesiri ịtụkwasị Dropbox obi? http://www.elladodelmal.com/2013/12/lo-que-se-comparte-por-dropbox-al.html N'ime ndepụta ahụ, enwere m Detuo.
Echere m na enwere m obi ụtọ na enweghị m data dị egwu ebe ahụ. Ma ihe ị hụrụ bụ ihe na-atọ ụtọ. Aga m amata na ọrụ ndị ọzọ esighi ike na nchekwa gị.
Ezi ntụgharị uche gị.
Echere m na n'onwe ya ọ ga-abụ ịgbazite VPS ma mepụta igwe ojii anyị na OwnCloud na ihe ndị yiri ya.
Tụkwasị Dropbox? - Ọ bụghị onye nzuzu, enwere m ahụmịhe ọjọọ na akaụntụ m, yana maka nkwado mgbe m zipụrụ x ego nke ozi ịntanetị m weere ya dị njọ.
SpiderOak kwere nkwa na otu a kwa Wuala, mana ka teknụzụ na-aga n'ihu, anyị kwesịrị iji ya gaa n'ihu. Echere m na igwe ojii na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbe ọ bịara inwe faịlụ anyị nchekwa ma nwee ike ịnweta ebe ọ bụla, mana dị ka kọmpụta Noctuido kwuru n'elu, imepụta ọtụtụ akwụkwọ na draịvụ ike anyị abụghị echiche ọjọọ na / ma ọ bụ ihe bara uru.
Onwe m, ejiri m Dropbox, mgbe nke ahụ gasịrị, ezitere m email iji kagbuo akaụntụ m, agara m Ubuntu Otu wee site na ntinye aka ọ ga-ekwe omume ịnweta ọtụtụ ohere diski mana amatadịghị ihe ndị canonical ji data anyị eme, otu ihe atụ nke a bụ ebubo Stallman nke Ubuntu nke nwere malware na spyware. Na ngwụcha, abụ m naanị onye ọrụ na-eji Ubuntu maka akụrụngwa ya na PPAs.
Nkwanye: Owncloud, Wuala na Bitcasa 😀
Na iwu nzuzo UbuntuOne, ha nwere okwu nke ha, ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla nwere ikike ma ọ bụ nwee ike ịnweta faịlụ gị, a ga-ebufe ha naanị na ụlọ ikpe. (NSA)
Dịka m nwere ma ọ bụ nye ikikere ihe niile m na-echekwa n'igwe ojii, achọghị m ụdị nkọwa ndị ahụ.
Owncloud bụ ọla nke igwe ojii na-echekwa, ntụpọ ya ka bụ enweghị asọmpi asọmpi na sava ndị na-enye gị ntinye nke igwe.
Ana m eji SkyDrive m maka ihe ndị ahụ, yana Mediafire na 4shared. Maka ihe ndị ọzọ niile, enwere m draịva 40GB m yana m na-edozi cyberlocker nke m na OwnCloud.
M na-eji Google Drive, ọ bụ ezie na m ga-ahụ n'anya na ọ dị na Linux (M ga-ahụkwa n'anya ma ọ bụrụ na mmadụ mee n'ọdụ ụgbọ mmiri).
Zaghachi Hugo Iturrieta
Enwere mmeghari iwu na-akwadoghị, mana ọ dị anya na nke dị maka Windows, nke gọọmentị. Ma ọ dịkarịa ala mgbe m nwara ya na ọ bụ ihe dị mkpa, amaghị m ma ọ bụrụ na ha emeela ka ọ dị mma. http://xmodulo.com/2013/10/mount-google-drive-linux.html
My onwe faịlụ adịghị mkpa e nwere ihe na Dropbox dị nnọọ obere, ma ihe dị mkpa n'ezie na oge na diski m na-echere ka m gbagoo nke m faịlụ sava.
Ya mere, ihe niile dị mma na-enweghị ihe ijuanya.
M na-eji box.com n'ihi na enwere m ike ịnweta ya site nautilus ma ọ bụ windo faịlụ nyocha site na webdav.
Ma ọ bụrụ na ị mepee akaụntụ gị na ekwentị gam akporo, LG na-enye gị 50 GB nchekwa. Uru ọzọ bụ na ịnwere ike ijikwa folda sitere na akaụntụ ndị ọzọ, yabụ site na akaụntụ bụ isi ị nwere ike ijikwa ndị ọzọ.
Ihe ọghọm bụ na na mbipute ya n'efu faịlụ enweghị ike ibu karịa 250MB.
Na n'ezie ejighị n'aka nke amaghị ihe na-eme na ihe ga-eme gị faịlụ.
Ọ bụla ikpe ọ na-atụ aro ka ị ghara ịchịkwa gị Mgbakọ. Ọ bụ ya mere ọ ji bụrụ usoro dị egwu ịtụkwasị data gị obi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ dị nro, na sava ndị ọzọ. Taa enwere uzo eletriki di ike (ma di onu ala) iji chekwaa otutu data ma oburu na ichoro ya. Ọ ka mma iji ebe nchekwa dị ka pendrive ma ọ bụ micro sd, ma mekọrịta ya na kọmputa nkeonwe. Ruo ugbu a, ọ bụ usoro kachasị nchebe nke ịnwe, ebe ọ bụla, faịlụ gị emelitere ma nwee ike gbanwee ebe ọ bụla. Ngwa dị mfe iji maka nke a bụ Unison.
Maka ihe ọ bụla, Tahoe-LAFS na I2P.
Maka data dị nro, echere m na ọrụ efu dị ka Dropbox na Google mbanye adịghị ezu, n'ihe gbasara ịchọrọ ịnweta nkwado ndabere na sava na igwe ojii enwere ezigbo nhọrọ iji were otu sava na Rackspace ma ọ bụ Amazon.
Onwe m na-eji Dropbox ka foto m were iPhone m gaa ozugbo na Linux, yana Google Drive fọrọ nke nta ka m jiri ya mee ka CV dị m aka ma ọ bụrụ na ohere ọ bụla bilie ises
Echere m na enweghị ike ịtụ anya ọrụ dịka megacloud, ọ bụrụ na anyị lelee na google, ọ bụghị nnukwu ọrụ na obere ewu ewu, ohere ọ ga-emechi dị oke elu, n'akụkụ a, echere m na ị nwere ike ịtụkwasị obi naanị ígwé ojii dị ka dropbox, google drive, Amazon, nnukwu ụlọ ọrụ nwere ihe a na-ahụ anya na akụrụngwa, ma ọ bụghị na ọrụ ndị anyị na-amaghị ma ọ bụrụ na onye na-anụ ọkụ n'obi na-akwụghị ụgwọ vps na njedebe nke ọnwa ma ha kwụsịtụ ya
M na-achọkarị ịma banyere Linux, n'ihi na n'agbanyeghị agbanyeghị mma ha si agba ya, windo enweghị isi, na-agwụ ike ma bụrụ nke a na-ahụ anya kwa ụbọchị (ma e wezụga inwe obi abụọ echekwa, n'ogo nke netwọkụ na nchekwa, ị ga-ahụ ma na-ata ahụhụ ụlọ ọrụ nke nje na Trojans nke ndị gọọmentị na-eji eme ihe n'ụzọ dị iche iche na cyber mafias na ndị tolitere n'okpuru nchebe ma ọ bụ onyinyo nke microsoft-cacasoft). Edemede zuru ezu. Long live Linux !!
Zaghachi maka ndị eserese
Ihe ngwọta maka ihe niile bụ ịnwe ihe nkesa gị ma jiri aka gị mee ihe, ị nwekwara ike ịnweta email nke gị
Iwu na-elele ma ọ bụrụ na ọdụ ụgbọ mmiri mepere na PC / Server ma ọ bụ ihe ọzọ dịpụrụ adịpụ